Tanora tsy tara – Fampiasana « facebook » : miseho amin’ny endrika mambabo ny ratsy | NewsMada
Tanora tsy tara – Fampiasana « facebook » : miseho amin’ny endrika mambabo ny ratsy
Par Taratra sur 06/07/2016
Tsy kely lalana ny ratsy ! Miseho amin’ny endriny maro ny ratsy indrindra amin’izao fahalalahan’ny fanatontoloana izao. Matetika amin’ny « facebook », endrika mambabo sy mandresy lahatra no hisehoan’ny ratsy.
Samy manao « facebook » ny ankamaroantsika tanora. Ahitana ny mahasoa ao kanefa mety hamotika na hamorika mihitsy ka mila mailo. Fantaro ary fa mila mailo ary mila hay ny mifehy ny « facebook ».
Efa avo lenta ary mahasahy mivarotra ny fanahiny mihitsy ireo mpisoloky sy mpanimba fiainan’olona amin’ny alalan’ny « facebook ». Lambolamboiny amin’ny zavatra tsara sy mahasarika ny tanora raha mora revo ary mora aminy avy eo ny milalao ilay haza.
Raha ny torolalana iarahan’ireo mpiaro ny zon’ny ankizy miaraka amin’ny Unicef, maromaro ireo fepetra tokony harahina rehefa mampiasa « facebook » mba tsy hitera-doza ho an’ny tena izany.
Voalohany amin’izany ny tsy tokony hizarana ny mombamomba ny tena manokana na ny mombamomba ny fianakaviana eny ambony rindrin’ny « facebook ». fantaro fa ny sary na horonantsary izay zaraina amin’ny namana dia tsy voafehy intsony fa miparitaka ary azon’ny hafa trandrahina amin’izay tiany.
Fadiana ny minamana na miresaka amin’ny olona tsy fantatra na misy fambaboana sy fisarihana toy inona aza ao anatin’izany. Tsy tokony hanaiky na hihaona amin’ny olona tsy fantatra.
Antsoy haingana ny laharan-tariby 147 raha misy loza mandindona anao na ny namanao na ny manodidina anao.